Daad CK6163 Jumlad culus oo jiif ah 4 qalabka saldhigga cnc Mashiinka lathe Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye Lu Young
CK6163 shaqo culus oo jiif ah 4 qalabka saldhigga mashiinka lathe cnc
CK6163 CNC lathe, laba dhidibka kontoroolka.Waxay u rogi kartaa dusha sare iyo silsilad dusha ah, dusha sare ee dusha sare, dusha wareega, mitirka iyo dhererka dhererka, iwm oo lagu qalabeeyay qalab afar meelood oo nasasho ah, ayaa dabooli kara baahiyaha kala duwan ee waxqabadka.
Ugu badnaan lulid sariirta korkeeda (mm)
Ugu badnaan lulaya dia. ka dul tallaabo iskutallaab (mm)
Dhererka ugu badan ee hawsha (mm)
Seddex gear Fasal maleh si loo badalo inta jeer
Tirada xawaaraha dunmiiqa
Range of xawaaraha dunmiiqa (r / min)
30-84 / 53-150 / 125-350 / 300-835 rpm
Qaab dhismeedka boosteejada dunmiiqa
Ballaca godka dunmiiqa (mm)
Dabaqa dunmiiqa dunta hore
(Metric) 120 1:20
Awooda mootada weyn (KW)
Max.travel of post qalab (mm)
X ： 530 Z ： 1200
Xawaaraha quudinta dhaqsaha badan (mm / min)
X ： 4000 Z ： 5000
Dib u dejinta saxnaanta (mm)
X ： 0.012 Z ： 0.016
Saxsanaanta Processing (mm)
Dhumucda dusha sare
Dhexdhexaadiyaha darafta ee gadaal (mm)
Safarka darafta ee dabada (mm)
Daloolka daloolka koorta ee gacanta dabada
Afarta saldhig ee mindi korantada toosan nasato
Horizontal Lixda saldhig ee mindi koronto ku nasato
Xaqiijinta nasashada (mm)
Dhererka qaybta gacan qabashada (mm)
Dherer * balac * dherer
3700× 1820 × 1710
Miisaanka saafiga ah (Kg)
1. Qalabka mashiinku wuxuu leeyahay adkaansho sare, gariir yar, wuxuuna la qabsan karaa goynta adag.
2. Nidaamka 'CNC' iyo 'spindle bearings' waxaa laga soo xulay soosaarayaal caalami ah oo caan ah, sidaa darteed mashiinku wuxuu leeyahay kalsooni sare.
3. Naqshad dhismeed heer sare ah iyo tillaabooyin farsamo oo qumman ayaa lagu hubiyaa in mashiinku leeyahay habsami u shaqeynta iyo awoodda haynta saxnaanta muddada dheer.
4. Qalabka makiinadaha, madaxa, sariirta sariirta, gadaal gadaal iyo waxyaabo kale oo muhiim ah waxaa lagu farsameeyaa qalab casri ah.
5. Qalabka mashiinku wuxuu qaataa naqshadeynta mechatronics, qaabka guud waa mid is haysta oo macquul ah, qalliinka ayaa ku habboon oo raaxo leh, dayactirkuna waa sahlan yahay.
Nidaamka xakamaynta GSK 928
Qawaaniinta isdabajoogga wareegga dunmiiqa wareega
Ku xir kubbadda saxda ah ee saxda ah
Nidaamka saliidaynta otomaatigga ah ee otomaatiga ah
Buugga saddex daan daansi
4 heysta qalabka korontada ku shaqeeya
1. Inta badan waxaa loo isticmaalaa rogida dusha sare iyo silsilad dusha, dusha dhamaadka, dusha sare, dusha sare ee dusha sare iyo dunta mashiinka, iwm Waxtarka sare iyo waxqabadka saxda ah.
2. Jidka sariirta si fiican ayaa loo cadeeyay ka dib markii uu deminaayay dhawaaq aad u sareeya.
3. Waxaa lagu dabaqayaa layman kala duwan sida baabuurta, waalka, aaladaha korontada iyo qalabka dhismaha, iwm.
1. Sideen ku dooran karaa mashiinnada ugu habboon?
Fadlan noo sheeg shuruudahaaga mashiinka, ama sidoo kale waxaad noo soo diri kartaa badeecooyinka wax sawiraya, injineerkeena ayaa kaa caawin kara xulashada tusaalaha kuugu fiican.
2: Waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkadaada?
A: Waxaan ku takhasusay dhammaan noocyada mashiinnada, sida Mashiinka CNC Lathe, Milling Machine Milling, Vertical Machining Center, Lathe Mashiinnada, Mashiinka Qodista, Mashiinka Qodida Radiyaalka, Mashiinka Mashiinka lagu qodo, Mashiinka qaabeeya iyo wixii la mid ah.
3: Waa maxay Shuruudaha Bixinta?
J: T / T, 30% bixinta bilowga ah marka la dalbanayo, 70% bixinta dheelitirka ka hor rarka; LC aan laga hortagi karin
4. Hubi aqbalaada
Markaad alaabta qaadanayso, fadlan si taxaddar leh u hubi badeecada: Haddii ay jiraan waxyeello xirmo, daadashada iyo inay alaabtu yihiin waxyeello gaadhay; In tirada wax soo saarka iyo qalabka ay la mid yihiin kuwa loo baahan yahay; Haddii faahfaahinta mashiinka oo dhami hagaagsan yihiin Haddii ay wax jiraan Dhibaatada mashiinka, fadlan sawirro qaado oo nala soo xiriir isla markiiba.
Xirmada mashiinka lathe cnc waa kiiska plywood-ka caadiga ah ee dhoofinta oo leh sariirta birta ee hoose, aad u xoog badan oo waara.
Mashiinka lathe cnc waxaa macaamiisha loogu rari doonaa xamuulka dhulka ama xamuulka badda.
Hore: CK6140 A 4 saldhig mashiinka korantada cnc lathe bir ah
Xiga: CK6432 qiimaha tartanka qiimaha shiinaha cnc goynta qaabka mashiinka lathe
CK61125 bir culus waajib culus CNC lathe m ...